Norway oo 194 maxaabiis ah xabsiyada kasii deysay. - NorSom News
Sida ay qortay wakaalada wararka NTB, Dowlada Norway ayaa isbuucyadii ugu danbeeyay xabsiyada kasii deysay 194 qof oo maxaabiis ah, si loo yareeyo khatarka faafitaanka xanuunka Corona-virus.
Hey´adda qaabilsan ilaalada maxaabiista ayaa sheegtay inay go´aansadeen in la yareeyo tirada maxaabiista soomaalida ah ee xabsiyada Norway ku xiran, si ay u yaraato faafista xanuunka covid-19 ee xabsiyada Norway.
Go´aankaas ayaa sababay in xabsiyada laga sii daayo dadka ku xukunaa danbiyada yar-yar, iyada oo loo tixgalinayo inaysan jirin sabab amni xumo oo ay bulshada kusoo kordhin karaan.
Sidoo kale dad u balansanaa in la xiro ama xabsiyada looga yeero, ayaa iyagana dib loo dhigay u yeeritaankooda xabsiga.
F.G: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe/Abonner.
Xigasho/kilde: 194 innsatte løslatt før tiden for å redusere smitterisiko
Previous articleMarxuum Ahmed Faarax oo maanta Oslo lagu aasay.
Next articleOslo: 40.000 ayaa lagu ganaaxay, markii uu dhowr mar kasoo baxay karantiilka